Union Government, NCA Signatory EAOs hold special meeting | NLD
1990 Election ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဒုတိယဗဟိုကော်မတီ ဒုတိယအကြိမ် ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးကြီးကဆုံးဖြတ်လိုက်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ
State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi to visit Singapore
President, First Lady vote for by-election at Tamway Tsp Constituency in Yangon
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်၌ မဲပေးမှု အခြေအနေ
Home News Breaking News Union Government, NCA Signatory EAOs hold special meeting
Posted By: mygate wayon: October 15, 2018 In: Breaking News, News, State Counsellor, State Counsellor Gallery, State Counsellor NewsNo Comments
The meeting continues today to discuss matters, such as self-determination and non-secession from the Union, adopting principles for establishingaunified Tatmadaw, and general issues.
State Counsellor receives Special Envoy of United Nations Secretary-General
ဒီလှိုင်းစာစောင်၊ အတွဲ(၇)၊ အမှတ် (၃၈)၊ (၁၅-၁၀-၂၀၁၈)
ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကချင်ပြည်နယ် ပါတီ-လွှတ်တော်-အစိုးရ တွေ့ဆုံပွဲသို့ တက်ရောက်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင်များအား မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးကလာရောက် တွေ့ဆုံပြီး သင်္ကြန်ဆုတောင်းစကားနှင့် နှုတ်ခွန်းဆက်စကားများပြောကြား
D-wave Journal Vol-8, No-14, 8.4.19
D.wave Journal Vol.(8), No.(13), (1.4.2019)
Dwave Journal Vol-8, No-12 (25.3.2019)
Dwave Journal Vol-8, No-10, 11.3.2019
Dwave Journal, Vol.(8), No.9, 4.3.2019